अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रभन्दा १२ किलोमिटर तल छाङरुमा बिओपी स्थापना, छाङरुकै सीतापुल र छियालेकमा यसअघि नै प्रहरी चौकी छन् – Hamrai Sajha Patrika
By संवाददाता	 On २०७७, १ जेष्ठ बिहीबार ०६:२३
कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सडक खनेको भनेर नेपालभर भारतको चर्को आलोचना भइरहेको वेला सरकारले दार्चुलाको व्यास नगरपालिकास्थित छाङरुमा सीमा पोस्ट स्थापना गरेको छ । छाङरु कालापानीको अतिक्रमित भूमिबाट १२ किलोमिटर तल पर्छ । त्योभन्दा माथि नेपाली भूमि कालापानी, नावी र नावीढाङमा भारतीय फौजका आठ क्याम्प छन् ।
स्थानीय जितसिंह बोहराका घर भाडामा लिएर अहिले बिओपी राखिएको छ । बुधबार बिओपी स्थापना भएपछि छाङरुमा सशस्त्रका इन्स्पेक्टर लिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको जनशक्ति खटिनेछ । तर, बुधबार भने त्यहाँ आठजनालाई मात्रै पुर्‍याइएको छ । बाँकी सिपाही बन्दोबस्तीका सामानसहित बिहीबार छाङरु उतारिने सशस्त्रको ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति डम्बरबहादुर विष्टले बताए ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको भारतीय फौजले छाङरुभन्दा माथि जान नेपालीलाई निषेध गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालीहरू त्यो क्षेत्र जाने अन्तिम यही हो । सशस्त्रको बिओपी पहिलोपटक स्थापना भए पनि यो छाङरुको सीतापुलमा र त्योभन्दा १२ किलोमिटर पूर्व (चीन)तर्फ टिंकरस्थित छियालेकमा नेपाल प्रहरीको चौकी छ । तर, हिउँदमा चिसो बढ्दै गएपछि माथिको प्रहरी चौकीका जनशक्ति तल झर्दछ ।
चिसो बढ्न थालेपछि छियालेकका प्रहरी सीतापुल आउँछन् । चिसो अझै बढेपछि दुवै चौकीका प्रहरी ४३ किलोमिटर तल राप्लाको दुम्लिङ झर्छन् । दुम्लिङमा प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)को कमान्डमा प्रहरी चौकी छ ।
यसरी कालापानीबाट १२ किलोमिटर तल छाङरु, त्यहाँबाट ४३ किलोमिटर तल दुम्लिङ पर्छ । त्यस्तै दुम्लिङबाट १३ किलोमिटर तल धौलाकोट र धौलाकोटबाट नौ किलोमिटर तल हुती र हुतीबाट चार किलोमिटर तल हिकिलामा पनि प्रहरी चौकी छ । हिकिलाबाट १० किलोमिटर तल ब्रह्मदेवको दुहु र दुहुबाट १० किलोमिटर तल दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पर्छ । यसरी नेपालले दार्चुला सदरमुकाममाथि छियालेकसम्म सात ठाउँमा प्रहरी चौकी राखेको छ । उता भारतले भने दार्चुदा सदरमुकामपारि धार्चुलाबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रसम्म १५ स्थानमा २८ क्याम्प बनाएको छ । २० क्याम्प भारततर्फ छन् भने नेपालको कालापानी क्षेत्रको तीन ठाउँ गुन्जी, कालापानी र नावीढाङ आठ क्याम्प राखिएको छ ।
भारतको व्यापार प्रतिनिधिसमेत बस्ने गुन्जी क्षेत्रमा एसएसबी, कुमाउँ स्काउटको भारतीय सेना र सिख बटालियन तैनाथ छन् । कालापानीमा आइटिबिपी (इन्डो–टिबेतियन बोर्डर पुलिस), एसएसबी र भारतीय सेनाका दुई गुल्म छन् । कालापानीबाट लिम्पियाधुरातर्फ नावीढाङमा आइटिबिपी र भारतीय सेनाको एक गुल्म तैनाथ छ ।
बिओपी स्थापनासँगै नेपाल प्रहरीको टोलीलाई पनि बिहीबार कार्यक्षेत्रमा पठाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी पदमबहादुर विष्टले बताए । ‘चिसोका कारण टिंकर छियालेक र सीतापुल चौकीका प्रहरी तल झरेका थिए । अब चिसो कम भए पनि बाटोको समस्या हुँदा अहिलेसम्म प्रहरी पठाउन सकिएको थिएन, अब सेनाको हेलिकोप्टरबाट चौकीमा जवानहरू पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिकाबाट।
अष्ट्रेलियामा वडादशैंको टिकाको शुभसाइत राज्य पिच्छे फरक, नेपालमा १०:१९ मा शुभसाइत! हेर्नुस् तालिका २०७७, १ जेष्ठ बिहीबार ०६:२३
यादव लम्सालको “रातो रिवन, कालो कपालमा” युट्युवमा सार्वजनिक ! २०७७, १ जेष्ठ बिहीबार ०६:२३
सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाज! के हो यो ? के का लागि? २०७७, १ जेष्ठ बिहीबार ०६:२३
अष्ट्रेलियाको ब्रिसवनमा दशैंको शुभकामना आदानप्रदान तथा “सुदुरपश्चिम समाज” समिति गठन ! २०७७, १ जेष्ठ बिहीबार ०६:२३
राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल, अष्ट्रेलिया शाखाको १ बर्ष पुरा २०७७, १ जेष्ठ बिहीबार ०६:२३